Augustine Mahiga :Shirka wuu dhici doonaa - BBC News Somali
Augustine Mahiga :Shirka wuu dhici doonaa
7 Abriil 2011
Image caption Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Augustine Mahiga
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa qoraal uu maanta ka soo saaray magaalada Nairobi waxa uu ku sheegay in shirka heerka sare ah ee wadatashiga arrimaha Soomaaliya uu dhici doono sidii loo qorsheeyay 12 iyo 13 bishan April.
Mahiga waxa uu sheegay in jawaabo wanaagsan uu shirku ka helay dhinacyada Soomaalida iyo madaxda diyaarka u ah inay ka qeybgalaan wada hadalka u dhexeeya dowladda Federalka ee KMG ah iyo dhinacyada kale ee ay wada shaqeeyaan.
Danjire Mahiga waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in kooxo yar oo ka soo horjeestay shirka ay yihiin qaar aan si buuxda u fahamsaneyn ujeedada runta ah ee shirka, taas oo sababtay jahawareer.
Waxaan aaminsanahay ayuu yiri in dadka qaar si khaldan loogu sheegay ujeedad shirka, QM doorkeedu waa inay hawsha fududeyso.
Mahiga wuxuu sheegay in beryahan dambe uu kala go'ay wadahadalkii u dhexeeyay TFG iyo dhinacyada ay wada shaqeeyaan, wuxuuna sheegay in sida waafaqsan heshiiskii Djibouti ay isaga kaalintiisu tahay in uu TFI gacan ku siiyo in ay dhammeeyaan khilaafkooda si hannaanka nabddu uu hore ugu socdo.
Waxa uu sheegay in shirkan uu diiradda saari doono baahida iyo hawsha ay tahay in la qabto si loo dhameeyo xilliga KMG-ka ah, waxa ka soo baxana la isku raaco qorshe horey loogu soconayo hanaanka nabadda iyo in lasoo afjaro xilliga kala guurka.
Waxa uu sheegay in shirkan uu u gogol xaari doono mid kale oo daba socda oo Muqdisho lagu qaban doono, sida ay dowladda KMG ah soo jeedisay.
Danjire Mahiga waxa uu sheegay in QM iyo beesha caalamku taageeradoodu ay u taagan tahay fududeynta shirka wadatashiga ah iyo in la taageero TFG iyo shacabka Soomaaliyeed, laakiin waxa ay khuseysaa dadka ka qeybgalaya in ay ka dhigaan shirka mid mira dhal ah.